15 Ruux Muslimiin Ah Oo Laga Wareejiyay Xabsiga Guantanamo. – Calamada.com
15 Ruux Muslimiin Ah Oo Laga Wareejiyay Xabsiga Guantanamo.
Masâ€™uuliyiin Mareykan ah ayaa sheegay in 15 ka tirsanaa Maxaabiistii ku xirneyd xabsiga weyn ee Guantanamo Bay in loo tarxiilay dalka Imaaraatka Carabta, taasi oo ka dhigan inay tahay markii ugu horreysay oo tiro Maxaabiis ah oo intaas la eg oo ku xirnaa Xabsigaas lagu wareejiyo mid ka mid ah dowladaha Saaxiibka la ah Mareykanka.
Maxaabiistan lagu wareejiyay Imaaraatka Carabta ayaa 12 ka mid ah waxay u dhasheen dalka Yemen, halka Seddax kalena ay u dhasheen dalka Afghanistan, waxaana tallaabtani ay hoos u dhigeysaa tirada Maxaabiista ee xabsigaasi ku xiran, taasi oo hadda lagu sheegay inay tahay 61 Maxbuus oo kaliya.
Maxaabiistan oo shalay lasii daayay waxay inkabadan Tobon Sano ku xirnaayeen Jeelka Sumcadda xun ee Guantamo, iyadoo aan lagu soo oogin wax dembiyo ah, waxayna intii ay xirnaayeen ay la kulmeen tacdiibin iyo jirdillo baahsan oo ay u geysteen ilaaladii Xabsigaasi iyo Saraakiil ka tirsan Waaxda dembi baarista ee Sirdoonka Mareykanka ee CIA.
Sarkaal Mareykan ah oo diiday in magaciisa Warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in Xukuumadda Washintong ay dhibaato xooggan kala kulantay sidii loo heli lahaa dal qaabila Maxaabiista 12-ka ah ee u dhashay dalka Yemen, maadaama sida uu tilmaamay aan dib loogu celin karin dalkooda, kaas oo tan iyo horraantii 2015-kii ay ka socdaan dagaallo sokeeye.
Maxaabiista laga sii daayo Xabsiga Guantanamo bay waxaa caadi ahaan Shardi looga dhigaaÂ in lala socon doono dhaq-dhaqaaqooda marka lasii daayo kadib, taas oo aan lagu tilmaami karin xorriyad buuxda, balse xoogaa yara dhaanta xabsigii adkaa ee muddada Sanadaha ah ay ku xirnaayeen.
Inkabadan 780 Maxaabiis Muslimiin ah ayaa lagu xiray Xabsiga Guantanamo Bay tan iyo markii la furay Sannadkii 2001-kii, kadib duullaankii gardarrada ahaa ee Mareykanku uu ku qaaday Maamulkii islaamiga ahaa ee xilligaasi ka talinayay dalka Afghanistan.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 13-11-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 13-11-1437 Hijri.